Adeegga Alaabada | Adeegga Macaamiisha & Soo-saaraha
Shaqaalaha isku dubba ridka xirfadleyda ah waxay isu imaanayaan alaabooyinka dhammaaday. Nidaamaynta wax soosaarka buuxa waa Naqshadeynta-laser goynta laser / olol Goynta / shaabadaynta-sameynta / foorarinta-CNC mashiinka-alxanka-dusha daaweynta-ururinta Hengli waxay leedahay khibrad iyo dabacsanaan ay kula shaqeyso macaamiisha doonaya inay qayb ka noqdaan noocooda. Waxaan ku faaneynaa sharaf weyn kaliya ma ahan balanqaadkeena tayada, laakiin sidoo kale rikoorkeena raadinta ee bixinta adeegyo been abuur ah oo wax ku ool ah oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay macaamiisheena. Muhiimadeena ...
Xarunteena Saadka ayaa la aasaasay dhammaadkii 2014, ilaa 50 shaqaale ah, iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda macluumaadka ee ERP iyo maaraynta qaanadda si loo hubiyo saxnaanta alaabta la keydinayo. Nidaamyada alaabada otomaatigga ah waxay ku shaqeeyaan iyagoo iskaan ku samaynaya barcode qaybaha. Qalabka baarista ayaa loo adeegsadaa in lagu akhriyo barcode-ka, macluumaadka ku qoran cinwaanka waxaa lagu akhriyaa mashiinka. Macluumaadkan waxaa dabagal ku haya nidaamka kombiyuutarka dhexe. Tusaale ahaan, amarka iibsigu wuxuu ka koobnaan karaa liistada waxyaabaha la jiidayo ...
Aqoon isweydaarsiga alxanka wuxuu bixiyaa been abuur qaab dhismeedka bir ah iyo been abuur saxan sax ah; 160 walder oo shahaado haysta, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah walidiinta waaweyn oo wata shahaadada TUV EN287 / ASME IX, in ka badan 80 mashiinada Panasonic MAG iyo 15 mashiinada TIG.20 aaladaha alxanka ee Kaka iyo Panasonic. ISO 3834 ayaa la caddeeyay sanadka 2018. Bixiye sax ah adeegyo been abuur been abuur ah laga soo bilaabo sanadkii 2002, Hengli Birta Processing waxay siisaa macaamiisha qarashka xalalka been abuurka wax ku oolka ah iyagoo isku daraya isticmaalkeena adva ...
Soosaarka Hengli wuxuu adeegsadaa mashiinada plasma ee CNC. Tikniyoolajiyada jarista Plasma waxay awood noo siineysaa inaan jarno biraha dhumucdiisuna tahay 1… 350 mm. Adeeggeena jarjarka plasma wuxuu waafaqsan yahay kala soocida tayada EN 9013. Goynta plasma, sida goynta ololka, waxay ku haboontahay jarista walxaha qaro weyn. Faa'iidada ay ku leedahay tan dambe ayaa ah suurtagalnimada in la gooyo biro kale iyo aalado aan suurta gal ahayn jarista ololka. Sidoo kale, xawaaraha ayaa si weyn uga dheereeya jarista ololka mana jirto baahi ...
Hawlaheena rinjiyeynta waxay ku saleysan yihiin shahaadada ISO 9001: 2015 Nidaamyada Maareynta Tayada. Waxaan bixinaa adeegga rinjiyeynta qoyan ee semi-otomaatigga ah ee ugu dambeeyay, oo ay ku jiraan xarun qotodheer oo kiimiko ah, qalabka qalalan, qolka casriga ah ee lagu buufiyo electrostatic iyo foornada warshadaha ee aadka u weyn. Caadi ahaan waxaan rinjiyeynnaa nooca soo socda: badeecadaha mashiinnada warshadaha, qaybaha mashiinnada beeraha, qaybaha mashiinnada dhismaha iyo kuwa kale. Khubaradayada rinjiyeynta qoyan waxay soo bandhigi doonaan po, tayo ...